Kenya iyo Itoobiya: Dalkee kusoo xad-gudbay Xuduudda Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya iyo Itoobiya: Dalkee kusoo xad-gudbay Xuduudda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya ayaa xiriirka u jartay dalka Kenya December 15, 2020, iyadoo sheegtay in go’aankaas kaga jawaaabeyso xad-gudubyo siyaasadeed iyo faragelin qaawan oo Kenya ku hayso madaxbannaanida Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya waxay sheegaty in Kenya gudaha dalkeeda ku abaabuleyso Jabhad fallaago ah si ay qaab dadban ugu qabsato qeyb kamid ah dalka, hayeeshee Wasiirka Amniga Jabbaland, Cabdirashiid Janan, ayaa sheegay in Ciidankaas ay yihiin Daraawiishta Jubbaland, oo ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya.
Ciidamada Kenya waxay dalka kaga sugan yihiin magaaloyin badan oo ay kamid yuhiin; Kismaayo, Abdalle Biroole, Kudhaa, Buurgaabo, Raaskanbooni, Sariiro, Kulbiyow, Hoosingow, Dhoobley, Taabto, Qooqaani, Afmadow, Ceelwaaq iyo goobo kale oo badan, saas oo ay tahay dowladdu si ay ula dagaalanto Ciidamada Jubbaland ee Gedo xoreeyay Toban sano kahor ayay ku rafaneysaa dagaal aan jirin oo ay sheegeyso inuu kala dhexeeyo Kenya.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, ayaa 19-kii January 2021, sheegay in dowladda Itoobiya ay calankeeda ka taagtay degaanno ka tirsan Gobolka, isagoo caddeeyay in 16-KM ay gudaha xadka usoo galeen, iyadoo tan iyo markaas maamulka Farmajo ka hadlin arinkaan.
Kenya calan kama taagin Baled-Xaawo, hayesshee Itoobiya calan ayay ka taagatay gudaha Soomaaliya, marka waxaa is-waydiin mudan labadaas dal kee kusoo xad-gudbay xuduuda Soomaaliya?
Farmaajo wuxuu afkiisa ka sheegay in uu doonayo in uu dalka ka hir galiyo dowlad dhexe oo kaligeed leh awoodda oo dhan, tan iyo markii uu yimidna wuxuu waday dagaal ka dhan ah Maamul Goboleedyada.
Sida muuqata danihiisa wuu ka fushtay Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, laakiin wuxuu wax ka qaadi waayay Puntland iyo Jubbaland, oo Beelaha Daarood ee isaga uu ka dhashay ay degaan.
Farmaajo wuxuu indhaha ka dadanayaa tacadiyada Tuulada Abaalay ka geysanayaan Ciidamada Itoobiya, wuxuuna ku faanaya iska hor keenidda iyo isku leynta Ciidammo Soomaaliyeed.
Farmaajo geed dheer iyo mid gaaban ayuu u fuulayaa si uu u marin habaabyo bulshada Soomaaliyeed, wuxuu abuurayaa mowjado dagaal oo aan jirin si uu dib ugu sii dhigo xal u helidda muranka ka taagan doorashiiyinka.
Farmaajo si gobolka qabiilkiisu dagan yahay uusan u maamulin Axmed Madoobe ayuu Ciidamadii sugi lahaa amniga Dalka oo dhan geeyay Gedo, wuxuu fursad siinayaa kooxda Al-Shabaab.